OJM : nekena ny filatsahan-kofidian’ny lisitra taritin’ i Harifeno Monica – Depeche TARATRA
Accueil/Social/OJM : nekena ny filatsahan-kofidian’ny lisitra taritin’ i Harifeno Monica
Rédacteur Chef 29 septembre 2021
Neken’ny vaomiera mpikarakara ny fifidianana ny mpikambana ao amin’ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) ny filatsahan-kofidian’ny lisitra taritin-dRasoloarison Harifeno Monica, lisitra tokana nirotsaka amin’izany.
Hanomboka rahampitso 30 septambra ny fampielezan-kevitra araka ny nambaran-dRambeloson Jean Aimé, filohan’ny vaomiera. Tsy misy fihemorana kosa fa amin’ny faha 16 oktobra izao no atao ny fifidianana izay ho mpikambana vaovao ao anatin’ity holafitry ny mpanao gazety ity.
Nifarana tamin’ny faha 26 septambra ny fe-potoana fanaterana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina ho filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Iray ny taratasy voarain’ny komity mpikarakara ny fifidianana, dia ny lisitra tarihin’ny mpanao gazety Rasoloarison Harifeno Monica.
Pêche et économie bleu: Madagascar adhère à la FiTI
Fifohana rongony mahery vaika : olona fito voasambotra tetsy Ankazomanga
Rano fisotro madio : mila 174 tapitrisa dolara isan-taona, hoy ny WaterAid Madagascar.
Facebook, Instagram et Whatsapp hors service
47% des enfants de 5 à 17 ans sont impliqués dans le monde du travail
Andranomena: basy kilalao no entin’ny jiolahy mamaky trano
CNIDH : l’élection des nouveaux membres du bureau contestée
LNTPB : mitohy ny fitakiana ny fanalana ny tale jeneraly